Alicloud သည် ဆော်ဒီအာ ရေ ဗျ တွင် ဒေတာ စင်တာ နှစ်ခု ဖွင့်လှစ် - Pandaily
(Source: Xinhua/Wang Haizhou)
Alicloud သည် ဆော်ဒီအာ ရေ ဗျ တွင် ဒေတာ စင်တာ နှစ်ခု ဖွင့်လှစ်
Jun 07, 2022, 18:25ညနေ 2022/06/07 23:15:33 Pandaily
Alicloud နှင့် Saudi Telecom (STC) တို့သည် ဆော်ဒီအာ ရေ ဗျ နိုင်ငံ၊ Riyadh တွင် အင်္ဂါနေ့က ပူးတွဲ ကြေငြာ ခဲ့သည်ၿမိဳ႕တြင္း ေဒ တာ စင္တာ ႏွစ္ခု တရားဝင္ ဖြင့္လွစ္အဆိုပါ စက်ရုံကို ဆော်ဒီ Cloud Computing Corporation (SCCC) မှ တည်ထောင် ထားသော ဖက်စပ် ကုမ္ပဏီ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဆော်ဒီအာ ရေ ဗျ စျေးကွက် သို့ အများ သုံး cloud ၀ န်ဆောင်မှုများ ကိုပထမ ဦး ဆုံး ပေးလိမ့်မည်။
အစောပိုင်းက STC သည် Alicloud နှင့် Yida Capital တို့နှင့်အတူ cloud computing ဖက်စပ် တည်ထောင် ခြင်းကို ကြေငြာခဲ့သည်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်း နှင့် မြောက် အာဖရိက ရှိ အကြီးဆုံး မိုဘိုင်း နှင့်ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာ STC သည် ဆော်ဒီအာ ရေ ဗျ သို့ ၀ န်ဆောင်မှုများ တိုးချဲ့ ရန် Alicloud နှင့်ပူးပေါင်း ခဲ့သည်။
ဒေတာ စင်တာ အသစ် နှစ်ခုကို SCCC မှ လည်ပတ် လိမ့်မည်။ ၎င်း ၏စီးပွားရေး မြင်ကွင်း တွင် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ရှိသော ကွန်ပျူ တာ၊ သို လှ ော င်မှု၊ ကွန်ယက် နှင့် ဒေတာဘေ့စ် များပါ ၀ င်သည်။
တနင်္ဂနွေ Riyadh အတွက် SCCC ၏ ဖွင့်လှစ် အခမ်းအနား မှာ, Alicloud Intelligence ၏ နိုင်ငံတကာ ဌာနခွဲ ၏အကြီးအကဲ ယွမ် Qian က “ဒါဟာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တစ်ခု ဆန်းသစ် မော်ဒယ် ဖြစ်ပါတယ်။ JV မှတဆင့် ကျနော်တို့ ဆော်ဒီ စျေးကွက် များအတွက် လုံခြုံ နှင့် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် မို cloud ်း တိမ် ကို computing ဝန်ဆောင်မှုများကို ထောက်ပံ့ ဖို့ STC ရဲ့ ဒေသတွင်း စီးပွားရေး နှင့် ဂေဟ ဗေဒ အားသာချက်များ နှင့်အတူ Alicloud ၏နည်းပညာ ပိုင်းဆိုင်ရာ အားသာချက် ပေါင်းစပ် ဖို့ မျှော်လင့် နေပါတယ်။”
ဆော်ဒီအာ ရေ ဗျ ၏ ၂၀၃၀ မျှော် မှန်းချက် ကိုတိုးမြှင့် နိုင်ရန်အတွက် ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ ၀ န်ကြီးဌာန (MCIT) သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ဒေတာ စင်တာ မဟာဗျူဟာ စီမံကိန်း ကိုစတင်ခဲ့သည်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း Aliyun သည် ဆော်ဒီအာ ရေ ဗျ တွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သဘောတူညီချက် များစွာ ရရှိခဲ့သည်။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ၾသဂုတ္လ တုန္းကေတာ့ ေဆာ္ဒီ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး Cloud Computing ပလက္ ေဖာင္း နဲ႔ နည္းပညာ အေထာက္အပံ့ ေတြ ကတဆင့္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြား ေတြရဲ႕ ဒစ္ဂ်စ္ တယ္
Aliyun သည် နိုင်ငံခြား စျေးကွက် များတွင် လျင်မြန်စွာ ကြီးထွား လာသည်။ လွန်ခဲ့သော သုံး နှစ်အတွင်း ပြည်ပ စျေးကွက် ၏အရွယ်အစား သည် ၁၀ ဆ ကျော် မြင့်တက်ခဲ့ပြီး အာရှပစိဖိတ် ဒေသ တွင်ပထမ နေရာတွင်ရှိသည်။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း နဲ႔ ဥေရာပ ႏိုင္ငံ ေတြကိုလည္း လုပ္ငန္း ခ်ဲ႕ထြင္ ခဲ့ပါတယ္။ Alicloud သည် ဒူ ဘိုင်း တွင် ဒေတာ စင်တာ တစ်ခု ဖွင့်လှစ် ထားသည်။ ၂၀၂၁ ဒူ ဘိုင်း ကမ္ဘာ့ ကုန်စည်ပြပွဲ အတွင်း Alicloud သည် China Pavilion ကိုတိုက်ရိုက် နည်းပညာ အထောက်အပံ့ ပေးခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Aliyun ၊ Saudi Telecom နှင့် EWTP Arab Capital တို့သည် ဖက်စပ် လုပ်ငန်း ကိုတည်ထောင် ခဲ့သည်
လက်ရှိတွင် Alicloud သည် ကမ္ဘာအနှံ့ ရှိ ဒေသ ၂၇ ခုတွင် ရရှိနိုင်သည့် 84 ရိယာ ၈၄ ခုကို လည်ပတ် နေပြီး အာရှ တွင် အကြီးဆုံး cloud အခြေခံအဆောက်အအုံ လည်းရှိသည်။ Gartner ရဲ့ နောက်ဆုံး အချက်အလက် တွေအရ Alicloud ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာ့ Cloud Computing ဈေးကွက်မှာ နံပါတ် (၃) နဲ့ အာရှပစိဖိတ် ဈေးကွက်မှာ နံပါတ် (၁) နေရာမှာ ရပ်တည် နေပါတယ်။ ၎င်း၏ ကမ္ဘာ့စျေးကွက် ဝေစု သည် ၉. ၅၅% ရှိသည်။
Tags Alibaba Cloud | Alibaba∗ | Cloud Computing | Cloud Data Centers
Zhejiang ျပည္နယ္ ဆက္သြယ္ေရးအာဏာပိုင္အဖြဲ႕သို႔ ဇူလိုင္ ၅ ရက္က တိုင္ၾကားသည့္ စာတစ္ေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ Ali Yun သည္ သံုးစြဲသူမ်ား၏သေဘာဆႏၵမပါဘဲ မွတ္ပံုတင္ထားခဲ့သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို Third party Partners သို႔ ေပါက္ၾကားေစမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
Industry Aug 23 ဩဂုတ် 24, 2021
Canalys ရဲ႕ ေဖာ္ျပခ်က္အရ တရုတ္ႏိုင္ငံမွာ Cloud အေျခခံအေဆာက္အအံုေစ်းကြက္ဟာ ၆၆ ဒသမ ၁ ဒီဂရီထိ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး Smart Cloud ႀကီးထြားမႈ အျမန္ဆံုး
Canals က တနလၤာေန႔ကထုတ္ျပန္တဲ့ တရုတ္ေစ်းကြက္ရဲ႕ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဒုတိယသံုးလပတ္အစီရင္ခံစာအရ တရုတ္ရဲ႕ Cloud Infrastructure Market ဟာ ဒီကာလအတြင္းမွာ ၅၄ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ျပီး ၆၆ သန္းအထိ ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။
Industry Sep 15 စက်တင်ဘာ 15, 2021
အလီ ဘာ ဘာ ၏ သုံးလ တစ်ကြိမ် ဝင်ငွေ သည်ဒေါ်လာ ၃. ၈ ဘီလီယံ အထိရောက် ရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၁၀% တိုးတက် ခဲ့သည်
တရုတ် နည်းပညာနှင့် e-commerce ကုမ္ပဏီကြီးအလီ ဘာ ဘာ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်ကုန်ဆုံး သည့် သုံးလပတ် အတွက် ဘဏ္ results ာရေး ရလဒ်များကို Group မှ ကြေငြာခဲ့သည်။ ထို ကာလအတွင်း ၀ င်ငွေ သည်ယွမ် ၂ ၄၂. ၅၈ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၈ ဘီလီယံ) သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ်လျှင် ၁၀% တိုးတက်ခဲ့သည်။